Abavelisi bePlastiki yePlastiki ezenzekelayo, abaXhasi - iTshayina yeZinto eziMiselweyo zePlastiki
Uhlobo olutsha umatshini wentsimbi iwelding sheet
Ukusetyenziswa kunye Nophawu 1.Welding Uhlobo: oxwesileyo weld kunye neqengqo pipe. Inkqubo yolawulo lwepaneli yokulawula ipaneli, ekwaziyo ukuzihlengahlengisa ngokuzenzekelayo ubushushu, ixesha kunye noxinzelelo ngokweeparitha zezinto eziphantsi kokulungiswa. Inkqubo yokulawula i-Nokia Siemens PLC, i-7-intshi yokubamba umbala wescreen-Nokia. Isakhelo esitsha esidibeneyo seBrand-3, indlela ethembekileyo yokuhambisa, ezinzileyo emsebenzini kunye ne ...
Isicelo kunye neNqaku le-SUD-BO1530 uthotho lunomsebenzi owomeleleyo ngokusebenza kakuhle, ekulula ukuwusebenzisa, ngokuqinileyo nangokuhlala ixesha elide. Isetyenziswa kakhulu ngomthi, intengiso, i-PVC, i-PE, i-PP, i-PPH, i-acrylic, ipleyiti yealuminiyam njl.njl. Ukuchaneka okuphezulu kwe-Taiwan isikhokelo somgama, ukuchaneka okuphezulu kwe-helical gear rack yokuhambisa. Uzinzo ngakumbi, ukuchaneka okuphezulu. Isakhelo esixhasayo esandisiweyo, qinisekisa ukuzinza kokuhambisa ...
Umatshini wokusika weplastiki ozenzekelayo
Ukusetyenziswa kunye neNqaku le-1.Unique ukusika okufakwe ngokupheleleyo, kukhuselekile kwaye kucocekile. 2. Isakhono sokuhlengahlengisa ngokuzenzekelayo isantya sokusika ngokwezinto ezahlukeneyo, ezilula kwaye ezilungele ukusebenza. Inkqubo yokucoceka okuzenzekelayo kunye nenkqubo yokhula, ukuqinisekisa ukuba uthuli luza kukhutshwa ngokugqibeleleyo, ukusika kube lula kunye nokucheba ukuqokelelwa kakuhle; Iinkqubo zenzwa yokuma ngaphambili nangasemva, ukukhawulezisa kunye nokuchaneka ekubekeni; Inkqubo ye-5.Saw yokupholisa, ukusombulula ukujamelana kunye nokuyeka izikhundla ...
Iphepha leplastiki elizenzekelayo lokuqengqeleka nokugoba umatshini
Ukusetyenziswa kunye noDidi lweWelding Type: welding ethe tyaba kunye nombhobho ojikelezayo. Inkqubo yolawulo lwepaneli yokulawula ipaneli, ekwaziyo ukuzihlengahlengisa ngokuzenzekelayo iqondo lobushushu, ixesha kunye noxinzelelo ngokwemiqathango yezixhobo eziphantsi kokulungiswa. Inkqubo yolawulo i-Nokia PLC, i-7-intshi yokubamba umbala wescreen-Nokia. Isakhelo esitsha esidityanisiweyo sinebrand, indlela yokuhambisa ethembekileyo, ezinzileyo emsebenzini kunye nokugqwesa ekusebenzeni ...
Iphepha leplastiki elizenzekelayo
Zenzekelayo umatshini iphepha ukugoba
Isicelo kunye neNkalo Uhlobo lweWelding: ukugoba iphepha leplastiki ukusuka ku-0-145 °. Inkqubo yolawulo lwepaneli yokulawula ipaneli, ekwaziyo ukuzihlengahlengisa ngokuzenzekelayo ubushushu, ixesha kunye noxinzelelo ngokweeparitha zezinto eziphantsi kokulungiswa. Inkqubo yolawulo i-Nokia PLC, i-7-intshi yokubamba umbala wescreen-Nokia. Isakhelo esitsha esidityanisiweyo sinebrand, indlela yokuhambisa ethembekileyo, ezinzileyo emsebenzini kunye nokugqwesa ...